Waxa la sheegay in meel ay lahayd hayada giologikaal servey la dumin doono oo laga dhisi doono guryaha reel estatka loo yaqaano. - ዜና ከምንጩ
Waxa la seegay hayada giologikaal servey ee etoobiya iyo xirfadlayaasha hayada oon war ka hayniin ay koox ka socoty wasarada macdanta iyo shidaalka oo u hogaaminayay Taakele uma ay dumiinayaan meel ay lahayd hayadaasi oo laga dhisi doono guryaha loo yaqaano reel esteetka.
Sida xogta wargayska addis maleda u ku sheegay ayaa ah in kooxda u hoogaaminayo Taakele umain in baajetki sanadka cusub ee loo xaqiijiyay ee hawl fulinta inta ay iska daayeen ay hawl fulin cusub ku dhaqmeen oo ay ku talo jiraan in shaqaalaha la dhimo oo hawshi ay sadex qof qabanayeen u qabto hal qof.
Sida ay sheegayaan wararka soo gaadhaya wargayska addis maled in ay khalad tahay qorshaha ah in la dumiyo mashruuca giologikaal serveey ee etoobiya, kaasi oo faaiido wayn u leh dalk sida u ugu doodayo wasiirka wasaarada biyaha iyo waraabka ee Dr. ingiiner Sileshi Bekele.
Sida ay sheegayaan xogaha addis maled intii u ingiiner Takele uma u yimid wasarada macdanta iyo shidaalka u mashruucaasi khasaare badani soo gaadhay.
Waxa kale oo xoogaha wararku sheegeen in ay ka mid tahay khasaaraha soo gaadhay mashruucaasi u ka mid yahay doorashadi kadib lacag dhan afar biiliyon oo biro o mashruuca hayadaasi loogu talo galay oo lagu qodi lahaa ceel biyaha dulka hostooda ah loo gudbiyay lacagtii xafiiska wasaarada awooda biyaha iyo waraabka, taasina ay hayadaasi culaays ku noqotay.
Sida ay sheegeen dadkii cabashada ka soo gudbiyay arintaasi cilmi baadhisti iyo xujadi ee loo ogolaaday hayada giologikal servey in u ka qaaday xafiiska wasarada macdanta iyo shidaalku oo u hoos keenay wasaarada , kaasina waxa u dalka ka dhigaya wadanka kaloiyaata ee aan lahaan doonin xafiiska geology servey.
Waxana la ogsoonyahay in u ku yaalo xafiiska giologikal serveey xafada boole degmeda gurdh shoola u leeyahayna gawaadhi waawayn iyo qaar dhaxdhaxaad ah sida oo kale laamo deegaanada oo dhan xafiisyaadooda 1192 boosas hawloood iyo 650 shaqaale.
Waxa u wargayska addis maleda soo ogaaday in shaqaalahasi 650 ah 300 oo ka mid ah ay ka shaqeeyaan cilmi baadhis loo yaqaano gioloogi,giofisiks,seismology,shoolkaanologi,geo termaal, geo kemistry, hidhroology,ingineriing geology,riservayer ingineriing, laboratory iyodhriiliing ingiineriing.
Xafiiskan ayaa sanadkii 1960kii la asaasay waxana u hoos imanayay xafiiskii la odhan jiray wasaarada soo saarka macdanta biyaha iyo awooda. Sanadkii 1975kii ayaa u ka hoos baxay xafiiskaas aan kor ku soo xusnay waxaana u lamagac baxay macahdka sahanka geology ee etoobiya waxaana u hoos yimid wasaarada macdanta iyo tamarta.
Hadana waxa dib sanadkii 1992kii wasaarada macdanta iyo shidaalka oo bayaanka tirsiga 194/1992 lagu sharciyeeyay magaca geologikaal servey ee etoobiya.sanadkii 2003dii oo la sameeyay dib u habaynta xafiisyada federaalka ayaa hadana dib u habayn lagu sameeyay asaga oo aan magaciisa iyo masuuliyadi u hayay aan waxba laga badalin oo hoos yimaada wasarada macdanta.
Hawlaha ugu muhiimsan ee uu xafiisku qabto ayaa waxa ka mid sahanka dhulka, daraasadka dulka iyo macdanta dhulka hoostiisa ku jira iyo cilmi baadhista kaydka macdanta in la baadho, in la qiiyaaso iyo in la ogaado meelaha ay macdantu ku jirto oo xad loo sameeyo.
Waxa kale oo la sheegay xafiisku hawlahiisa ku saabsan qodista ceelalka kala duwan iyo shay baadhyada ee u qabto ka sakoow waxa u qabtaa xiliyada ka baxsan shaqooyinkoda caadiga ah asaga oo isticmaala mashiinadiisa siyaadada ah macaamisha ka baxsan xafiiska in u uqodo ceelal, shaybaadhista, usoo gudbinta xogta ku saabsan dhulka hoostiisa iyo la talin. Sanadkiina waxa u xafiiska u soo xareeyn jiray lacag dhan ilaa iyo 20 milyon oo bir.
Waxa intaas dheer in xiligan xaadirka ah na u ku hawlanyahay qodista godka tamarta awooda laydhka ee ku yaala aluuto laangaano oo loo qoorsheeyay in u soo saaro tamarta awooda korontada 70 mega wat, wareegi kawaad oo soo saaraya tamarta awooda korontada 35 mega wat.
Sida oo kale waxa la ogaaday in u diyaargarwga ugu jiro qodista ceel soo saari kara tamarta awooda korontada oo ku yaala agagaarka tandhaaho.
Waxa u addis maleda soo ogaaday in sahanka giologikaal ee etoobiya in u hormudka u yahay sahanka giologiga dmaareeyaha guudna ay hoos yimaadan 10 directero iyo labo xafiis.waxa kale oo hoos yimaada xafiiska guud ee giologistiga sideed teknikaal director marka la isku wada daro waxa u leeyahay 18 directero ah labo xafiis iyo mashaaric isku habaysn.
Total views : 7504863